MYANMAR LGBTIQAs COMMUNITY AWARD – CAN-Myanmar
(၁) မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်မဆို တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ ဆုအမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက် (၁) ဦးကိုသာ အဆိုပြုတင်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၂) အဆိုပြုတင်သွင်းမည့်သူအနေဖြင့် အဆိုပြုတင်သွင်းခံမည့်သူ၏ သဘောတူညီချက်ကိုရယူပြီး အဆိုပြုတင်သွင်းကြောင်းကို အဆိုမတင်သွင်းမှီ သတင်းပေးပို့ထားရှိပြီးဖြစ်ရမည်။
(၃) သဘောတူညီချက်များရရှိထားပြီး လျှောက်ထားလာသော အဆိုပြုလွှာများကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်း ၍မရပါ။
(၄) ဤအဆိုပြုလွှာ တွင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များအားလုံးတို့ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံမှုမရှိသည့် အဆိုပြုလွှာများကို ဆုစိစစ်ရွေးခြယ်ရေးကော်မတီမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်မ ဟုတ်ပါ။
(၅) အဆိုပြုတင်သွင်းခံမည့်သူသည် အဆိုပြုတင်သွင်းမည့်သူမဖြစ်ရ။ မိမိကိုယ်ကို အဆိုတင်သွင်းခြင်း မပြုရ။
– သားသမီး၏ ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံသဘောပေါက်ပြီး စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုအတွက် ထောက်ပံ့ကူ ညီပေးခဲ့/နေ သည့် မိဘဖြစ်ရမည်။
– သားသမီး၏ ဖြစ်တည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး အိမ်တွင်းနှင့်ပြင်ပတွင် ကျရောက်အံ့သော ခွဲခြားဆက် ဆံခံရခြင်းများ ကို အပြည့်အဝရပ်တည်ကာကွယ်ပေးခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။
– မိမိတို့သားသမီးအပြင် အခြားသော လိင်စိတ်ဝိသေသကွဲပြားသူ လူငယ်များကို လက်ခံနားလည် နွေးထွေးပျူငှာ ပေးသော မိဘတစ်ဦးဖြစ်ရမည်။
– မိမိတို့သားသမီးအပြင် အခြားသော လိင်စိတ်ဝိသေသကွဲပြားသူ လူငယ်များ ၏အခွင့်အရေးအ တွက် သက်ဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်ရမည်။
လိင်စိတ်ကွဲပြားသူ၏ ဆွေသဟာ အထူးဂုဏ်ပြုဆု
– မိမိမိတ်ဆွေ၏ ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံသဘောပေါက်ပြီး စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုအတွက် ထောက်ပံ့ကူ ညီပေးခဲ့/နေ သူဖြစ်ရမည်။
– မိမိမိတ်ဆွေ၏ ဖြစ်တည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ကျရောက်အံ့သော ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်းများ ကို အပြည့်အဝ ရပ်တည်ကာကွယ်ပေးခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းရှိသူဖြစ်ရမည်။
– မိမိနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေအပြင် အခြားသော လိင်စိတ်ဝိသေသကွဲပြားသူများကို လက်ခံနားလည် နွေးထွေးပျူငှာ ပေးသူတစ်ဦးဖြစ်ရမည်။
– မိမိ၏မိတ်ဆွေနှင့်အတူ အခြားသော လိင်စိတ်ဝိသေသကွဲပြားသူများ၏ အခွင့်အရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သော သမိုင်းကြောင်း ကောင်းမွန်စွာရှိသူ၊ ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်ရမည်။
– မြန်မာနိုင်ငံဒေသအတွင်းရှိ လိင်ဝိသေသ၊လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူများနှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်း ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– မြန်မာနိုင်ငံဒေသအတွင်းရှိ လိင်ဝိသေသ၊လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူများနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်း ဆောင်တာများနှင့် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို လူထုအတွင်း စည်းရုံးလှူံ့ ဆော်ခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်း အများဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ရမည်။
– မြန်မာနိုင်ငံဒေသအတွင်းရှိ လိင်ဝိသေသ၊လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူများနှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို အစောဆုံးကာလမှစတင်ပြီး ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– မြန်မာနိုင်ငံဒေသအတွင်းရှိ လိင်ဝိသေသ၊လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူများနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်း ဆောင်တာများနှင့် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို လူထုအတွင်း စည်းရုံးလှူံ့ ဆော်ခြင်းများကို အများဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ရမည်။
– မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လိင်ဝိသေသ၊လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူများနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်း ဆောင်တာများကို စံပြဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာမျိုးဆက်သစ် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု ကို မြေတောင်မြှောက်မွေးထုတ်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း LGBTIQAs နှင့်ဆက်စပ်သည့်အရေးများ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် ကွယ်လွန်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်အား အောက်မေ့သတိရ ဂုဏ်ပြုဆု။
(၁) ဆုစိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီကို သက်ဆိုင်ရာဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ စီမံကိန်း တာဝန်ခံများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ အကြီးတန်း LGBTIQAs လူထုခေါင်းဆောင်များ၊ အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
(၂) ဆုစိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီသည် အဆိုပြုတင်သွင်းလာသော အဆိုပြုလွှာများကို ပြည့်စုံစွာ လက်ခံပြီး ကော်မတီအတွင်းရှိ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏သဘောတူညီချက်မျှမပါပဲ ဆုကိုရွေးခြယ် ပေးအပ်ခြင်းမပြုရ။
(၃) ဆုစိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီသည် ရွေးခြယ်ခံရသူများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များမှအပ ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်မရရှိပဲ ပြင်ပသို့ စောစီးစွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမပြုရ။
(၄) ဆုစိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီမှ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သော နောက်ဆုံးရလာဒ်များသည်သာ အတည် ဖြစ်ပြီး အခြားမည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဆောင် ရွက်ခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်မရှိ။
(၅) ဆုစိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီသည် ဖွဲ့စည်းပြီးသည်မှစပြီး နှစ်စဉ် အခါအားလျော်စွာ Myanmar LGBTIQAs Community Awards ဆုအတွက် ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်အပ်တံ့သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ ကို အဆိုပြုတင်သွင်းလာခြင်းရှိပါက စိစစ်သုံးသပ်သွားရန် တာဝန်ရှိသည်။
Sr. Name Position Represented Organization Appointed Position in Committee Remark
1. Saw Zin Maung Soe Founder/Chairperson of the Board of Consultants C.A.N-MYANMAR Chairperson
2. Naw Ya Ya Aye Myat Founder National Transgender People Alliance of Myanmar
3. U Aung Zaw Htun Founder/Program Manager TRY CBO Member
4. U Cho Ko Naing Founder Burmese Tomboys Group Member
5. Daw Su Su Hlaing Founder Bright Pride Myanmar Lesbians Organization Member
6. U Soe Lin Maung Chairperson Myanmar MSM & Transgender Network Member
7. U Tin Ko Ko Founder/ Program Manager Kings & Queens Organization Member
8. U Chit Ko Ko Founder Lotus Organization Member Outstanding LGBTQIA Activist of the year Awardee for 2017
9. Daw Sue Sha Shin Thant Founder & Advisor Space Organization Member Outstanding LGBTQIA Activist of the year Awardee for 2018
10. Ko Moe Aung Central Board Member Myanmar LGBT Rights Network Member Hero Awardee of 2019
11. Ko Aung Phyu Htut Executive Committee Member Myanmar Youth Stars Network Member
12. Daw Khine Zar Thwe Development Coordinator Rainbow Alliance – LGBT+ Youths Empowerment Program Member
13. Daw Myat Noe Phyu Activist Independent Member Outstanding Friend Ally of LGBTQIA of the year Awardee for 2017
14. U Phyo Thit Luu Activist Independent Member
15. Daw Nyan Nyan Activist Independent Member
16. Dr. Pyae Sone Hein Executive Director C.A.N-MYANMAR General Secretary The Secretary team members are not concerned with voting processes, and will only perform in administration and operation.
17. U Kaung Zaw Htet Program Director C.A.N-MYANMAR Secretary (1)
18. Daw Zar Zar Oo Finance & Operations Manager C.A.N-MYANMAR Secretary (2)
19. U Min Thant Tin Program Assistant Officer C.A.N-MYANMAR Secretary (3)
ယခုနှစ်အတွက် အဆိုပြုရန် အဆိုပြုလွှာကို အောက်တွင် Download ပြုလုပ်၍ ရယူအဆိုပြုနိုင်ပါသည်။
20200520_Myanmar LGBTQIAs Awards Normination_Form_PyinDaungSu_.docx
20200520_Myanmar LGBTQIAs Awards Normination_Form_PyinDaungSu_.pdf